Albaabka Xadka Iiraan ayaa loo xiray Virus Virus | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraAlbaabka Xadka Iiraan ayaa loo xiray Virus Virus
24 / 02 / 2020 06 Ankara, 98 Iran, Gobolka Central Anatolia, Aasiya, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Fure koronka oo laga xiray Iran
Ciraaq waxay xireysaa irrid xuduudeedka dalkan sababtoo ah noocyada cusub ee coronavirus (Kovid-19) oo sababay dhimashada Iran waxayna abuurtay miis xiisadeed oo ka dhex jira Wasaaradda Caafimaadka. TransAsia Express wada shaqeynaya dhexeeya Turkey iyo Iran, iyadoo Tehran iyo Van tareen tareenada xamuulka rakaabka ayaa joojiyay.
Dhimashada 4 qof oo Iran ka dhalatay coronavirus ayaa ka walwalsan Ciraaq. Qaar ka mid ah ciraaqiyiinta ayaa bilaabay inay dalbadaan in irdaha kastamka laga furo Iran si loola dagaallamo corona gudaha waddanka oo aan ku filnayn kaabayaasha warbaahinta bulshada. In kasta oo qoraallo badan lagu soo dhigay barta Twitter-ka oo ay ku qoran tahay cinwaannada "Xidhnow xuduudaha Iran", qaar ka mid ah fariimaha ayaa loo adeegsaday muuqaallo ay ka mid yihiin "ahmiyaddu inay ahaato caafimaad" iyo "Caawimaad". Ka dib horumaradan, Meysane Governorate wuxuu shaaciyay in Custeyb Kastamka Iibka, oo u furay Iran dariska la ah, in la xiray shilalka coronavirus. Hadalada ay soo jeediyeen gudoomiyaasha Basra iyo Diyala, waxaa lagu cadeeyay in qeybaha caafimad ay ku yaalliin irdaha xadka ee Iran iyo Ciraaq.
Wasiirka Caafimaadka Fahrettin Koca, Waxaan Iran ku leenahay 3 irdo xuduudo madow. Intaa waxaa u dheer, waxaa sidoo kale jira albaab xuduudeedka Dilucu ee u furan gobolka Nakhchivan. Tallaabooyin dheeri ah ayaa looga baahnaa xuduuda iyadoo la kaashanayo talo bixinteena gudiga sayniska ee hoos timaada Wasaaradda. Isgoysyada wadada iyo tareenka ayaa la joojiyay 17.00 maanta. Duulimaadyada hawada ayaa sidoo kale loo joojin doonaa si keli keli ah .. Dhammaan duullimaadyada caalamiga ah, ee ka imanaya dadka ka imanaya Iran, ayaa loo joojiyey keligood si ku meel gaadh ah iyo si ku meel gaadh ah 20.00:XNUMX. Go'aanka waxaa lagu sameeyay cabirka coronavirus.
Ninku wuxuu caddeeyay inay ka codsadeen dukumiinti rasmi ah rakaabka Iiraan ee sheegaya inay caafimaad qabaan "Codsigan waa la oggolaaday, waxaa la bilaabi doonaa galabnimada Axadda. Marka lagu daro buugaagta Ingiriisiga iyo Turkiga, waraaqaha macluumaadka ee Faaris ayaa lagu daray rakaabka jooga irdaha xuduudaha ilaa maanta. ”
Sida lagu sheegay bayaanka ay soo saartay TCDD; Turkey, korodhka dhimashada ka coronavirus ee Iran xidhay xadka ay la Iran. Turkey-Iran is TransAsia Express shaqeeyaan inta u dhexeeysa Tehran iyo Van tareen rakaab adeegga tareenka ayaa mar la hakiyey sidii 23:17.00 saacadood on Sunday, February XNUMX.
Sida la og yahay, link tareenka rakaabka ee u dhexeeya Iran iyo Turkey, Waxaa bixiya Trans Asia Train oo usbuuciiba mar wada inta udhaxeysa Ankara-Tehran-Ankara iyo Van-Tehran Train oo usbuucii hal mar udhaxeeya Van-Tehran iyo Van.
Iiraan xuduuda u dhaxeysa TURKEY IYO kuwaas?
Gürbulak (Ağrı) Agaasinka Kastamka Gürbulak Bazergan Firfircoon Joogto 04.09.1953-4 / 1407 Iran
Kapıköy (Van) Agaasimaha Kastamka Kapıköy Razi Firfircoon Joogto 13.05.2010-2010 / 411 Iran
Esendere (Hakkari) Esendere Kastamka Agaasinka Canshuuraha Serow Firfircoon Joogtada 15.09.1964-6 / 3651 Iran
Agaasinka Kastamka Borualan - Firfircoon - Iran
xadka Iran-Turki ah oo 560 kiiloomitir la Turkey ee ugu dheer Second Km Haddii Xuduudda Xuduudda 1639 labada dal saxeexay Treaty of Qasr Shirin yimid in la-Sano In ilaa maanta. Laba ka mid ah xuduudaha dalka ee Nakhchivan xadka Dilucu Crossroads iridda soohdinta ay Kenya la Ciraaq-Turkey Start Oo End in Point of isgoyska ee dalka. Sanadka 1930 ee saddexagalka Turkey-Ciraaq-Iran ee qolo Kurdishka Dheeraynta Against Management of Living on Afghanistan u dhaxaysa Sadex Dalalka Oo Sadabat Heshiiska la saxiixay. Ay bixiyaan Turkey on January 1, 1985 Taariikhda Borual iridda xadka ilaa iriddii soohdintu waxay la xiray on Iran by furitaanka ka dhanka ah aan xad lahayn.
Tareenka ayaa xirmay qaraxa
Iran heshiis la Turkey, Door furay in la kordhiyo dhoofinta
Biriijka oo la xiray Khatarta Khatarta
Jidka Alemdağ ee Ümraniye wuxuu xiran yahay Sannadka 3 sababtoo ah Shaqada Gaadiidka Maqalka
Saldhigga tareenka ee Budapest ayaa la xiray sababtoo ah qaxoontiga magangalyo doonka
Taksim Metro ayaa la xidhay shaqadii dayactirka
Kantaroolka Tareenka ee Kocaeli ayaa xiray A Street iyo A Street For Traffic
Wadooyinka qaarkood ayaa lagu xiray gaadiidka sababta oo ah qaraxa ka dhacay Ankara
Sababta Ramadaanka Adeega Cunnada ee YHT'ler waa xiran yahay
30 Waddooyinka qaarkood ayaa xiran baabuurta Istanbul ee Sabtida Sabtida Guusha Victory Day
Subway waxay kuxirantahay wadanka Ukraine sababo la xiriira coronavirus
Taariikhda 'Bursa Grand Bazaar' waa la xirey Cudurka Coronary Virus